बुटवलमा कम्प्युुटर व्यवसाय फस्टाउँदो छ -::DainikPatra
आइटीको हब नै मानिने रूपन्देहीमा दिन प्रतिदिन यसको व्यवसाय पनि बढ्दो छ । केही वर्ष अगाडि १० –१५ वटा कम्युुटर तथा ल्यापटप पसल रहेको रूपन्देहीमा हाल भने ६० देखि ६५ वटा पुुगिसकेका छन् । व्यक्तिगतदेखि अफिसियल कामसम्मको लागि आइटीका सामानहरूको प्रयोग बढ्नाले यसको व्यवसाय बिस्तारै फराकिलो बन्दै छ। बुुटवलमा पनि थुुप्रै कम्प्युुटर र ल्यापटप बिक्री तथा मर्मतका पसलहरू संचालन भइरहेका छन् । यसैमध्येको एक हो– बुुटवल ट्राफिक चोकमा रहेको लुुम्बिनी कम्प्युुटर सप्लायर्स । विगत २ वर्षदेखि लामो समय आइटी फिल्डमा बिताएका ३ जनाको लगानीमा संचालनमा आएको यस सप्लायर्सले छोटो समयमा नै आफ्नो नाम स्थापित गर्न सफल भएको छ। यसै लुुम्बिनी कम्प्युुटर सप्लायर्सका संचालकमध्येका एक सुवास घिमिरेसँग दैनिक पत्रको लागि गरेको छोटो कुुराकानी :-
१) पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा कम्प्युुटर व्यवसाय कस्तो छ ?
बुुटवल र यो सेरोफेरो आइटी क्षेत्रका लागि निकै राम्रोे मानिएको छ । यहाँ दिन प्रतिदिन आइटीसम्बन्धिका पसलहरू खुुलिरहेका छन् । बिक्री बढे पनि प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै रहेको छ । अझ आइटी नै पढेर व्यवसाय संचालन गर्नेहरू बढिरहेका छन्, जुुन अत्यन्त सकारात्मक हो । म पनि बिगत १० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छुु । शुुरुमा इन्स्टिच्युुटका रूपमा पढाएर यो पेशा शुुरु गरेको हँुु । बुुटवलका विभिन्न ठाउँमा हँुुदै २ वर्षदेखि ट्राफिक चोकमा आइटीमा निकै दख्खल राख्ने संचालक यादव अर्याल र प्रितम सापकोटासँग मैले पनि काम गर्ने मौका पाएको छुु ।
२) यहाँको कम्प्युटर सप्लार्यसमा के कस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ ?
हामीले विभिन्न ब्रान्डका ल्यापटपदेखि कम्प्युटरका हरेका सामानहरू बिक्री तथा मर्मत गर्ने गरेका छौँ । यसैगरी फोटोकपी, फ्याक्सलगायत केही अन्य एसेसरीजहरू पनि राखेका छौँ । हामीसँग दक्ष तथा अनुभवी प्राविधिक टोली पनि छ । त्यसैले बिक्री र मर्मत दुबै सेवा दिएका छौँ र सबैको मन जित्ने प्रयासमा लागेका छौँ । हाम्रो विशेषता भनेको नयाँ सामानलाई बजार लैजान सक्नु र पुरानोलाई राम्रोसँग मर्मत गर्न सक्ने क्षमता हो ।
३) यो क्षेत्रको सम्भावनाका बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न ?
साँच्ची नै विशेष रुचि र चासो अनि लगनशील भएर लाग्ने हो भने यो क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै सम्भावना रहेको छ । हाम्रै सप्लायर्समा पनि विभिन्न टे«निङहरू संचालन भइरहेका छन् । यहींबाट सिकेर गएका धेरैले रोजगारी पाउनुका साथै आफ्नै व्यवसाय पनि संचालन गरिरहनुभएको छ । कम्प्युटर ल्यापटप मर्मतबारे तालिम लिएर यो व्यवसाय संचालन गर्ने हो भने अझ धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । तर बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।